MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardVAS mm Archives - Page2of2- MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: VAS mm
VAS Promotion – FAQs MM
CONTENT HUB အမေးအဖြေများ
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အနုပညာရှင်များ၏ YouTube , Facebook နှင့် အခြားသော Social Media များမှာမရရှိနိုင်သည်. နောက်ဆုံးရသတင်းများအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်များဖြင့် ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူမည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်ခမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
ဝန်ဆောင်မှုအား ရယူမည်ဆိုပါက ဗွီဒီယို ၁ ဖိုင်လျှင် ၂၅၀ ကျပ် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး (၅) ရက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂါနေ့ နှင့် ကြာသပတေးနေ့များတွင် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုဝန်ဆောင်မှု၏ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက အင်တာနက်လိုအပ်ပါသလား။
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုုုအတွက် Promotion ကာလသည်ဘယ်ရက်မှာစပြီး ဘယ်ရက်မှာပြီးဆုံးမည်နည်း။
Promotion ကာလသည် ၂၉ ရက် ဇန်နဝါရီလတွင်စပြီး ၂၄ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြီးဆုုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှု အားမည်ကဲ့သို့ရယူရမည်နည်း။
ဝန်ဆောင်မှုအားရယူလိုပါက CEL ဟုရိုက်ထည့်၍ 8405 သို့ message ပေးပို့ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
*8406*1*1# အားဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအားရယူနိုင်ပါသည်။
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုှုအား မည်ကဲ့သို့သော ပုံစံဖြင့်ရရှိမည်နည်း။
ထိုဝန်ဆောင်မှုအား စာတို (Message) စနစ်ဖြင့် ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုစာတို (Message) တွင် ဗွီဒီယိုဖိုင် (Link) ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ထို (Link) အားနှိပ်၍ ဗီဒီယိုအား ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Contents Hub မှဝန်ဆောင်မှုပေးသော အနုပညာကြယ်ပွင့်များ၏ လက်တလောလှုပ်ရှားမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုချင်သည့် အခါတွင်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးမပြုလိုတော့ပါက UNCEL ဟုရိုက်ထည့်၍ 8405 သို့ပေးပို့လိုက်ပါက ၀န်ဆောင်မှုရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Promotion ကာလအတွင်းဝန်ဆောင်မှုအား ရယူမည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်ခမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
Promotion ကာလအတွင်းဝန်ဆောင်မှုအား ရယူမည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်ခ ပေးရမည်မဟုုတ်ပါ။ Promotion ကာလအပြီးတွင် ဝန်ဆောင်မှုအား ဆက်လက်ရယူမည်ဆိုပါက ဗွီဒီယို ၁ ဖိုင်လျှင် ၂၅၀ ကျပ် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 30, 2016 အောက်တိုဘာ 21, 2016 Categories Promotion mm, VAS mm
Special Treatment MM
အထွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုပိတ်ထားသော ဖုန်းသို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ (က- အထွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုပိတ်ခံထားရသောဖုန်းတွင် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပါလျှင်၊ SMS သို့ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုသာလက်ခံနိုင်ပါတယ်)
က – အထွက်ခေါ်ဆိုမှုကိုပိတ်ခံထားရသောဖုန်းတွင် ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ၁၅ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအနေဖြင့် ငွေလက်ကျန်သက်တမ်း ၁၅ရက်အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ၁၅ရက်သက်တမ်းကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှုကို ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပိတ်ခံထားသော ဖုန်းသို့ ငွေဖြည့်ပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ (ခ- အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပိတ်ခံထားသော ဖုန်းမတွင် ရက်ပေါင်း ၃ဝထက်ပို၍ လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ကုန်ဆုံးနေပါလျှင် )
ခ – အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပိတ်ခံထားသော ဖုန်းသို့ ဖုန်းအချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးပြီး ဝေမျှသုံးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေဖြည်ခြင်းအတွက်လက်ခံရယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ၁၅ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းအနေဖြင့် ငွေလက်ကျန်သက်တမ်း ၁၅ရက်အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ၁၅ရက်သက်တမ်းကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အဝင်လက်ခံမှုနှင့် အထွက်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ပိတ်ခံထားသော ဖုန်း ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 အောက်တိုဘာ 21, 2016 Categories Balance mm, VAS mm
Balance Transfer mm
၁။ Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ?
ငွေလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက်*223*လွှဲမည့်ငွေပမာဏ*ငွေလက်ခံရယူမည့်သူ၏မိုဘိုင်းနံပါတ်#ကိုရိုက်နှိပ် ခေါ်ဆိုပါ။ ဥပမာ။ *223*1000*09456456456#[send]
၃။ အပိုဆောင်းဆုရရှိထားသော လက်ကျန်ငွေ (Bonus) ကိုအခြား MPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထံသို့ လွှဲပေးနိုင်ပါသလား?
၅။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှ တဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေ ရရှိနိုင်မှာပါလဲ?
MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံး(1-way block and 2-way block ဖြစ်နေသော သုံးစွဲသူများအပါအဝင်)သည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အခြားသူများထံမှ လွှဲပြောင်းငွေလက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
၇။ 1-way block ဖြစ်နေသောဖုန်းသို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း?
1-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်း ကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး လက်ကျန်ငွေ သက်တမ်းမှာ ရက်၉၀ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်၉၀အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်၉၀ကျော်လွန်သွားသောအခါ မူလအတိုင်း အထွက်ခေါ်ဆိုမှုပြန်လည် ပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
၂။ တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက အနည်းဆုံး/အများဆုံးလွှဲပြောင်းနိုင်သည့် ငွေပမာဏဘယ်လောက်ပါလဲ?
တစ်ကြိမ်လျှင်ငွေ ၃၀၀ကျပ်မှ စတင်ပြီး ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိ ပမာဏကို မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေ့တာ(နေ့စဉ် မနက် 00:00နာရီမှ ည23:59နာရီ) အတွင်း အများဆုံး ၅ကြိမ်အထိ လွှဲပြောင်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။
၄။ ဘယ်သူတွေက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှာပါလဲ?
MPT GSM/WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ကို အသုံးပြု၍ မိတ်ဆွေများထံသို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူသည် MPT SIM Card စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍လက်ရှိအချိန်အထိ အနည်းဆုံး ဖုန်းဘီလ်၃၀၀၀ကျပ် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းသူတွင် လွှဲပြောင်းပေးမည့်ပမာဏအတွက် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရမည်ဖြစ်သည်။
၆။ CDMA အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါလား?
လက်ရှိတွင် CDMAဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
၈။ 2-way block ဖြစ်နေသောဖုန်းသို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း?
2-way blockဖြစ်နေသော ဖုန်းသည် Balance Transfer ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းပေးခြင်း ကိုလက်ခံရယူနိုင်ပါသည်။ ငွေဖြည့်ခြင်းလက်ခံရရှိပြီးသောအခါ ဖုန်းကိုပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းမှာ ရက်၉၀ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေသက်တမ်း ရက်၉၀အတွင်းမှာ ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါက ရက်၉၀ကျော်လွန်သွားသော အခါ အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အပိတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 ဩဂုတ် 31, 2020 Categories Balance mm, VAS mm
“Yu Htar+” service MM
၁။ ယူထား+ ၀န်ဆောင်မှု ဆိုတာဘာလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လက်ကျန်ငွေနည်းနေသည့်အချိန်တိုင်းတွင် MPT ၏ “ယူထား+” ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ “ယူထား+” ဝန်ဆောင်မှုကို အရေးပေါ် အခြေအနေများနှင့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ရန်လွယ်ကူခြင်းမရှိသောအခြေအနေများတွင် *800# ကိုခေါ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
၂။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုရယူမလဲ?
USSD code အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်း အတွက် *800# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
SMS အသုံးပြုပြီး ငွေချေးခြင်းအတွက် “8000” သို့ 800 ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
MPT4U application မှတဆင့်လည်းရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
MPT သုံးစွဲသူများ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ချေးငွေရယူသုံးစွဲနိုင်သော ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန် *800# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် ယူထား+ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
(၁) ဤဝန်ဆောင်မှုသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
(၂) MPT ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။
(၃) ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် တစ်ခါဖြည့်ထားရပါမည်။
(၄) ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
(၅) ယခင်ယူထားသော ချေးငွေကို ပြန်လည်မပေးချေရသေးသော်လည်း ရရှိနိုင်သောပမာဏအထိ ထပ်မံချေးယူနိုင်ပါသည်။
(၆) သင်ချေးယူနိုင်သောပမာဏကို MPT ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းသောပမာဏနှင့်ဖြည့်သွင်းသည့်အကြိမ်ပေါ်မူတည်၍ ကန့်သတ်တွက်ချက်ပါမည်။
၄။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ချေးငွေဘယ်လောက်ထိချေးယူနိုင်ပါသလဲ?
သတ်မှတ်ထားသောသင်၏ချေးငွေပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါပမာဏများကို ချေးယူနိုင်ပါမည်။
၈၀၀ ကျပ် ၆၀ ကျပ် ၈၆၀ ကျပ်
၁၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၁၁၀၀ ကျပ်
၁၅၀၀ ကျပ် ၁၅၀ ကျပ် ၁၆၅၀ ကျပ်
၂၅၀၀ ကျပ် ၂၅၀ ကျပ် ၂၇၅၀ ကျပ်
၄၅၀၀ ကျပ် ၄၅၀ ကျပ် ၄၉၅၀ ကျပ်
သင်၏ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပေါ် မူတည်၍ ချေးငွေပမာဏနှင့်၀န်ဆောင်ခကို နောက်တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အပြည့်အ၀(သို့)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကောက်ခံပါမည်။
ချေးငွေအနည်းဆုံးပမာဏ ၈၀၀ကျပ်ကိုတစ်လအတွင်း (၁)ကြိမ်သာချေးယူနိုင်ပြီး ၊ ယင်းလအတွင်း နောက်ထပ်ချေးငွေများများရယူရန်အတွက် ပိုမိုများပြားသောချေးငွေပမာဏသို့ပြောင်းလဲရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုအား ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပါသလဲ?
ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိလာသော ချေးငွေကို MPTဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများမှလွဲ၍)
Value Added Service ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါအခြေအနေ (၂)ခုလိုအပ်ပါသည်။
၁။ SIM Card အသုံးပြုသည့်ရက်မှာ ရက်(၃၀)အထက်ရှိရပါမည်။
၂။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဖုန်းဘေလ် အနည်းဆုံး(၃၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၆။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသော ချေးငွေအသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းကဘယ်လောက်လဲ?
ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ ရရှိသော ချေးငွေ၏သက်တမ်းသည် ရက်(၃၀)ဖြစ်သည်။ ယင်းကာလပြီးနောက် ချေးငွေအားသုံးစွဲနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
၇။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှု၏ ကြွေးကျန်ငွေကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါလဲ?
၁။ *800*7# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီးချေးယူထားသောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။
၃။ 8000 သို့ Debt ဟု ပြန်လည်ပေးပို့၍ စစ်ဆေးပါ။
၄။ MPT4U Application မှတဆင့်လည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၈။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိချေးယူရရှိနိုင်သော ငွေပမာဏကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ?
၁။ *800*0# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ရရှိနိုင်သောပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။
၉။ ယူထား+ ဝန်ဆောင်မှုမှ မိမိ၏ ချေးငွေစာရင်းကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါသလဲ။
၁။ *800*5# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။
၂။ *800#ကိုခေါ်ဆိုပါ -> “တခြား”ကိုရွေးပြီး ချေးငွေစာရင်းကို ရွေးချယ်ပြီးစစ်နိုင်ပါသည်။
၁၀။ MPT ဘက်မှချေးငွေကန့်သန့်ချက်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ ?
MPT (အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု) အသုံးပြုမှုပမာဏ
MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသော ရက်အရေအတွက်
၁၁။မိမိမှာ ၈၀၀ ကျပ်ပဲချေးယူနိုင်ပြီး တခြား MPT အသုံးပြုသူမှာ ၄၅၀၀ ကျပ် အထိ ဘာကြောင့် ရရှိနေပါသလဲ?
ချေးငွေစနစ်မှ ရရှိနိုင်မှုပမာဏကို အောက်ပါအချက်အလက်နှင့်အညီ ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
MPT ဆင်းကဒ်လက်ရှိအသုံးပြုသောရက် အရေအတွက် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချေးငွေပမာဏအများဆုံး ရရှိနိုင်ရန် MPT ဆင်းကဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အခုပဲဖုန်းဘေလ်တွေ ပိုပြီး ဖြည့်လိုက်ပါ။
၁၂။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ international roaming ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
၁၃။ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုမှ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း နှင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 ဇွန် 10, 2021 Categories Balance mm, VAS mm